हे भगवान यस्तो के देख्नुपर्यो ? गाडीले हानेर ढाड भाच्दिएपछि बिस्तारामै दिसापिसाब, आशु आउने भिडियो « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
हे भगवान यस्तो के देख्नुपर्यो ? गाडीले हानेर ढाड भाच्दिएपछि बिस्तारामै दिसापिसाब, आशु आउने भिडियो
गुल्मी । मान्छेको जिन्दगी हो कतिबेला कस्तो पछ र भाग्य या भनौ आफनै कर्मले कहाबाट कहा पुराएर लैजान्छ अतापतो हुदैन । हो त्यस्तै घटना घटेको छ गुल्मी रुरु गाउपालिकाको यो दुखी परिबारमा । घरको एक्लो छोरो कमाउनका लागि आफूभन्दा टाढा रहेर काम गर्छ तर एकदिन अचानक सुनवलमा पछाडिबाट गाडीले हानेर मेरुदण्ड भाचिदिन्छ ।
त्यसै त दुखी परिबार झन दुखमा पर्दै जान्छ । भैरहवा उपचार गराउदा सम्पती सकियो अहिले पाल्पाको तानसेन मिसन अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ तर जब हामी त्यहा पुग्यौ उनी घाउको दुखाई र तडपाईले छटपटीरहेका थिए । त्यहा पुग्दा हामीले यो सोच्यौ कि मानिसको जिन्दगी र भगबान पनि गरिबप्रति किन यसरी निर्दयी भएका होलान । यो परिबारलाई अस्पतालमा जो हेर्न जान्छ सबको आखामा आशु देखिन्छ, यदि तपाईले सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने प्लीज यो भिडियो सेयर गरेर भएपछि थोरै आफूसक्दो सहयोग गर्नुहोला l